GNOME 3.34 ikozvino yave kuwanikwa muArch Linux repositories | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura rapfuura, iyo GNOME Project yaive nemufaro we zivisa vhezheni nyowani yenzvimbo yako yakajeka. Ndezve GNOME 3.34, chitsva chitsva cheimwe yeakanyanya kufarirwa eLinux desktops ayo, kunyangwe ichisanganisira akawanda maficha maficha, akataura kuti chinonyanya kukosha chimiro chayo kumhanya. Nguva pfupi isati yatanga, takaudzwa kuti paive nemagovanwe mashoma aifarira kuzviwedzera munguva pfupi uye zvinoita sekunge maminetsi mashoma apfuura takawana chimwe chazvo.
Nezuro, yepamutemo GNOME Project account pa Twitter yakazivisa kusvika kwenzvimbo yayo yakajeka kune iyo Arch Linux zvinyorwa, saka vashandisi veiyi yepamusoro sisitimu yekushandisa uye kugovera kunobva pairi izvozvi vanogona kuisa GNOME 3.34. Imwe yeakatanga kupihwa kugovera yave iri Manjaro Linux, sezvauri kuona mune iyo skrini inotungamira ino chinyorwa.
GNOME 3.34 inokurumidza chaizvo
GNOME 3.34 ikozvino inogona kuwanikwa mune iyo Arch Linux repositories! Idzi inhau dzakanaka dzevashandisi veArch chero kupi? # btwIUseArch
- GNOME (@gnome) September 20, 2019
GNOME 3.34 inogona kuwanikwa muArch Linux repositories! Nhau huru dzevashandisi veArch kwese kupi.
ipai @ManjaroLinux naGnome 3.34 kutenderera! @gnome https://t.co/1XMzZo7dPt pic.twitter.com/hP8Xe97vsE
- Manjaro Linux (@ManjaroLinux) September 21, 2019
Ipa Manjaro Linux kutenderera neGNOME 3.34!
Kumhanyisa padivi, uye ichi chinhu chandakaona kunyangwe mumuchina chaiwo weUbuntu 19.10 Eoan Ermine, mamwe emhando dzinozivikanwa dzeGNOME 3.34 ndiwo mukana wekugadzira maforodha mumenu yekushandisa, iyo inotibvumidza isu kuronga zvidhori nemapoka, kuti iyo Sarudzo yeSystem fafitera inoteerera uye isu tinogona kuidzikisa kusvikira imwe chete yemapaneru maviri aonekwa, kana kubata-kumusoro mumufananidzo wayo, unosanganisira zvidhori zvakagadzirwazve. GNOME Project yatorawo mukana wekunatsiridza akawanda mashandisiro ayo, pakati payo tine browser yayo, Mumhanzi, Mepu kana Terminal iyo ikozvino inozivawo mitauro ine kunyora kwayo kuri kurudyi kuenda kuruboshwe kana mativi ese ari maviri.
Kune rimwe divi, GNOME 3.34 ichave iri desktop vhezheni iyo Ubuntu 19.10 Eoan Ermine ichashandisa. Wakambozviedza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 3.34, ikozvino yawanikwa muArch Linux repositories, inouya kuManjaro
Iyo rondedzero yeanonyanya kufarirwa Snap mapakeji nekuparadzira kwaizivikanwa